Golaha wasiirada oo meel mariyay in la soo saaro shidaalka ceyriinka ah ee laga helay Turkan – The Voice of Northeastern Kenya
Golaha wasiirada oo meel mariyay in la soo saaro shidaalka ceyriinka ah ee laga helay Turkan
Kulan aan caadi eheyn oo ay yeeshen maanta golaha wasiirada ee dalka ayaa meel mariyay qorsha lagu doonayo in lagu bilaabo in lasoo saaro shidaalka ceyriinka ah ee goor sii horeysay laga helay Contiga Turkana.
Waxay wasiiradu isku afgarteen in shidalka ugu hore ee lasoo saarayo ay tahay 2,000 ilaa 4,000 oo fosto oo loogu safriyo ilaa Maamul goboledka Mamobasa ee gobolka xeebta ee dalka si saafi looga soo dhigo kadiban looga iibiyo dalalka kale.
Shidaalkan oo countigaasi laga helay sanadkii 2012-kii ayaa dowlada waxaa ay qorsheeneysaa sidii ay suuq dibada ah ay ugu heli laheed shidaalkaasi.
Sikastaba ha ahaate saliidaasi oo lagu wado in la geeyo Mombasa ayaa la sheegay in lagu soo qaadi doono mise lagu soo safrin doono qaab wado iyo mid tareenba iyadoo hadda dowlada ay bilawday in 3.2 bilyan oo shilin ay dayactir ay ugu sameyn laheed wadada Eldoret iyo Lokichar oo ah goobta shidaalka lagu qoday.
Kulankaasi ay lahaayen wasiirada oo uu shir gudoominayay Madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa sidoo kale ansixiyay in saliida qaab dhuun saliid ah looga soo dhoofiyi Lokichar ilaa Countiga Lamu taaso marka dambe Dalkani Kenya uu saliidaasi ugu safrin doono goobo kale.
Dowlada ayaa sidoo kale wada qorsha ay ku doneyso in la balaariyo islamarkaana dayac tir lagu sameeyo Bundada Kainuk si ay ugu sahlanaato in gawaarida saliida qaadaya ay si dhib la’aan ah ugu safraan bundadaasi.
Ugu dambeyn wasiirada ayaa sidoo kale ka hadalay qaabkii la isugu diyaarinyo shirka caalamiga ah ee hormarka dalalka Africa ee lagu wado in lagu qabto Magaalada tan Naiorobi dabayaaqada bishan Agosto.
← Dalkan Kenya oo la sheegay in uu hogaanka u hayo shaqo la’aanta gudaha qarada Africa
Warbixin laga soo saaray maanta wadooyinka ugu shilalka badan dalka →